तीनजुरेको बदमासी…माकुरा फ्लेवरको वाइन
काठमाण्डौं/ बजारमा विभिन्न फ्लेवरका वाइनहरू पाइन्छन् । तीमध्ये एउटा माकुराको फ्लेवरमा पनि पाइन्छ भन्दा तपाईं तीन छक्क पर्नुहोला ? जिब्रो टोक्नुपर्दैन ।
तेर्‍हथुमको ‘तीनजुरे’ वाइनद्वारा उत्पादित ‘हर्बल हनी’ नामक वाइनमा माकुरा भेटिएको हो । घट्ना हो, कीर्तिपुरको एक लिकर्स प्यालेस नामक पसलको…जहाँ माकुराबाला वाइन पाइएको छ । सबैलाई थाहा छ, माकुरा विषालु जीव हो । अझ खाद्यवस्तुमा नै माकुरा भेटिनुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यो ठाडै जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड होइन र..? के हेरेर बसेका छन् सरोकारबाला निकायहरू ?
यो घट्ना एकपटकको संयोग मात्र होइन । केही समयअघि अर्को पसलमा पनि सोही कम्पनीको ‘हर्बल हनी’ वाइनमा झिंगा, साङ्लाका खुट्टा र घिनलाग्दा लेउहरू भेटिएका थिए । जसको सम्पूर्ण वस्तुगत प्रमाणहरू ट्रीमिडियामा सुरक्षित रहेका छन् ।
यो भिडियोमा देखिएको तीनजुरे वाइनको ‘हर्बल हनी’ हो । जुन बोतलमा लेउ र माकुरा स्पष्टसँग बाहिरबाटै देख्न सकिन्छ । यसका अन्य रेडवाइन र फ्रुटवाइनको हालत पनि त्यस्तै छ ।
यसले शुरू-शुरूमा केही स्तरीय उत्पादनहरू बजारमा पठाए पनि कालान्तरमा स्वादमा परिवर्तन आउनुकासाथै यसको बोतलभित्र कहिले लेउ जमेको देखिन्छ त कहिले माकुरा र साङ्लाका खुट्टाहरू पाइन्छन् । जसको भिडियो खिचेर उपभोक्ता स्वयंले सप्रमाण उजुरी गर्दा पनि उत्पादक कम्पनीले टेरपुच्छर लगाएनन् ।
यसैगरी २0७३ चैत २९ गते जताततै नयाँवर्ष २0७४ मनाउने भव्य तयारी भइरहेको बेला देशभरिका बिक्री डिपोहरूबाट उल्लेख्य माग भइआएको थियो । तर, सोही समयमा मकवानपुरको दामनस्थित ‘सुनगाभा’ रेष्टुरेन्टमा उपभोक्ताले खरिद गरेको एउटा बोतलभित्र साङ्लाको खुट्टा तैरिइरहेको भेटिएपछि हँगामा मच्चिएको थियो । उक्त रेष्टुरेन्टले बाघमति अञ्चलका डिलर आदित्य लिकर्स प्रालि. मार्फत् उत्पादक कम्पनीमा स-प्रमाण गुनासो र उजुरी गर्दा पनि कहिले खोलिसकेको बोतलमा जेसुकै भेटिए पनि जिम्मेवारी लिन नसक्ने जवाफ आउँछ त कहिले फ्याक्ट्रीकै प्राविधिकहरूको त्रुटि देखाएर पन्छिँदै आएको पाइएका छन् ।
जबकी त्यो बोतल खोलिएकै थिएन । ट्रीमिडियान्युजका पत्रकारहरूले पटक-पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा तीनजुरे वाइनका चेयरम्यान मोहन लामा र मार्केटिङ्ग म्यानेजर प्रकाश श्रेष्ठले गैरजिम्मेबारपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदै आएको पाइएका छन् । स्रोतका अनुसार तेर्‍हथुमको लसुनेस्थित फ्याक्ट्रीबाट चेयरम्यान लामा र म्यानेजर श्रेष्ठले यी सबै नामहरू बन्द गरेर नयाँ बोतलमा पुरानै माल भरेर दशैँको मुखमा बजार पठाउने तयारी पो गर्दैछन् रे..! यता भने सो वाइनको राजधानीस्थित अधिकृत बिक्रेता आदित्य लिकर्स प्रालि. ले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मुद्दा दर्ता गराउने भएको छ ।
Previous Postआलेख ः पर्यटक बढ्ने आशमा होटलमा खर्बौं लगानीPrevious Post
Next Postसंचालनमा आयो “फुयाँल सुटिङ स्टुडियो”Next Post